Cardlytics: Bank Card-Linked Marketing | Martech Zone
Cardlytics: Azụmaahịa Banyere Kaadị Ejikọtara
Saturday, October 19, 2013 Tọzdee, Ọktoba 17, 2013 Douglas Karr
Ikike gị nwere ike ịdabere na ndị ahịa dabere na ọdịdị ala na akụkọ ihe mere eme na-aga n'ihu na-akawanye mma. Ego oru nwere ike ugbu a imeghe ọnụ ụzọ nke ụgwọ ọrụ, iguzosi ike n'ihe omume na-enye ozugbo zụrụ iji gị akụ. Kaadị Ejikọtara Kaadị (CLM) bụ mgbe ndị ahịa na-agakwuru ndị na-azụ ahịa ozugbo site na nkwupụta akụ ha n'ịntanetị. N'ezie, Bank of America na-eji Cardlytics eme ihe ike BankAmeriDeals.
Maka ndị mgbasa ozi, Cardlytics na-anapụta ebumnuche n'ọtụtụ, ịkwụ ụgwọ maka arụmọrụ na ọnụego ziri ezi
Zube ndị ahịa dabere na omume ha: ọnọdụ, oge, mkpokọta ego.
Nka mkpọsa ahaziri iche maka otu ndị ahịa.
Ahịa Ahịa: mmụba ndị ahịa na-aga, ahịa, omume ịzụrụ azụ.
Ndị mgbasa ozi na-akwụ ụgwọ naanị maka nsonaazụ: tụrụ ọnụ ahịa mgbakwunye.
Maka ndị ahịa, Cardlytics na-ewepụta ahụmịhe ahaziri iche nke dị mfe ma na-arụ ọrụ
Ndị ahịa na-ahụ mgbasa ozi ahaziri iche dabere na nzụta ndị gara aga.
Ndị ahịa na-ahọrọ mgbasa ozi na ụgwọ ọrụ na-ebugo ozugbo na debit ma ọ bụ kaadị akwụmụgwọ.
Ndị na-azụ ahịa na-azụ ahịa ma jiri kaadị na-akwụ ụgwọ.
Ndị ahịa na-enweta ego azụghachiri na akaụntụ ha.
Bankinglọ akụ na-akwụ ụgwọ n'ịntanetị ugbu a na-akpata 53% nke azụmahịa ụlọ akụ na Cardlytics chụpụrụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ $ 512MM na mmefu mkpọsa na Q2 2013!
Tags: kaadị akụkaadịiguzosi ike n'iheụgwọ ọrụ
Brightcove: Na-eduga online Video Platform
Ahụmahụ: Platform Channel Marketing